Ihe ngosi tii, Guangzhou 2021
Tea Expo, Guangzhou 2021
Ụlọ Ọrụ Weebụ http://www.teaexpo.cn
Categories: Tii & Kọfị
China (Guangzhou) mba tii expo a maara dị ka ndị kasị nnukwu-ọnụ ọgụgụ, ahịa na-agba mbọ, ika na-agba mbọ na ọkachamara tii ngosi na njem
China (Guangzhou) mba tii expo a maara dị ka ndị kasị nnukwu-ọnụ ọgụgụ, ahịa na-agba mbọ, ika na-agba mbọ na ọkachamara tii ngosi na njem. E hiwere ya na 2006, na ngosi ahụ amalitela ngwa ngwa. Ọ bụrụla "vents" na "temometa" amaara nke China na ụlọ ọrụ tii ọ bụla. Kemgbe 2010, ebupụtara ebe a site na etiti China gaa mpaghara C nke China na-ebubata na mbupụ ngosi. Kemgbe afọ 2011, emeela ya na mmiri na ụbịa. Na 2012, Tianjin meijiang tii ụlọ ọrụ na tii omenala expo e guzobere, nke a na-enwe otu ugboro n'afọ. na-agbaso isi okwu nke usoro ise gara aga nke Macao tea expo, a ga-ehiwe ụlọ ahịa nke mba tii na Guangdong-hong kong-Macao nnukwu mmiri mmiri na Zhuhai otu ugboro n'afọ
China tii mgbasa mkpakọrịta
Tọrọ ntọala na 1992, China mgbasa mgbasa mkpakọrịta bụ mpaghara obe, ngalaba na ngalaba ikike mba nwere nke ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, otu na-elekọta mmadụ na ndị mmadụ n'otu n'otu n'ọhịa tii, nhazi, njikwa, njikwa, nyocha sayensị, na izi ihe.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ndị China mgbasa mgbasa mkpakọrịta agbasowo nzube nke "na-arụ intermediary ọrụ na ụlọ ọrụ na-eje ozi tii ụlọ ọrụ na China". Arnweta ozi mgbanwe na ndụmọdụ ọrụ; Iji kwalite ọganihu nkà na ụzụ na ọrụ mmepụta nke ụlọ ọrụ ahụ ; Iji hazie mgbanwe teknụzụ; Iji zụọ ndị ọkachamara na ndị ọrụ aka na ndị njikwa ụlọ ọrụ; Hazie asọmpi nka na ụzụ na nkwanye ngwaahịa; Hazie ihe ngosi, nkuzi pụrụ iche, ememe tii na ihe ngosi nka; Iji kọọ ọnọdụ ọhụrụ na nsogbu dị ugbu a nke njikọ dị iche iche nke tii. mmepụta na nrugharị na ngalaba steeti dị mkpa maka ndị otu, ma tinye echiche na aro banyere ịhazi atumatu mmepụta, atumatu, usoro na ụkpụrụ; Iji nyere aka ma rụọ ụfọdụ ọrụ nhazi nke ngalaba gọọmentị tozuru oke nyere; Ọ na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịchịkọta mmekọrịta dị n'etiti ndị otu na interes Ndị isiokwu nke njikọ ọ bụla na ụlọ ọrụ ahụ, na-eme ka mmekọrịta dị n'etiti ndị òtù, na-akwalite ụdị imekọ ihe ọnụ na njikọ akụ na ụba na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ahụ, na-ewusi njikọ na otu ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na ụlọ na mba ọzọ.
Anni Huỳnh Ọnwa 10 ọnwa iri na otu
Achọrọ m ịchọta ụfọdụ aha ngalaba maka imepụta téa